RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibkii ugu fiicnaa bishii October Kooxda Bayern Munich oo la shaaciyey… (Ma Lewandowski mise Gnabry?) – Gool FM
(Munich) 13 Nof 2019. Waxaa la shaaciyey ciyaaryahanka ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa Kooxda Bayern Munich bishii la soo dhaafay ee October.
Robert Lewandowski ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii bisha October kaddib bilihii August & September oo uu ku guuleystay abaal-marintan.
Kaddib markii uu abaal-marintan hantay bilihii August iyo September, waxaa markale Robert Lewandowski loo magacaabay abaal-marinta xiddiga bisha October ee kooxda Bayern Munich.
Weeraryahankan ayaa helay 75.6% codadkii la dhiibtay waxaana uu kaalinta koowaad kaga soo baxay tartanka ay kula jireen qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Munich.
Waxa uu abaal-marintan ku garaacay Serge Gnabry oo kaalinta labaad ka soo galay codeyntan kaasoo helay 9.8% codadkii la dhiibtay iyo Goolhaye Manuel Neuer oo isna booska saddexaad ka soo muuqday isagoo helay 6.1% codadkii la dhiibtay.
Ma’ahayn wax la yaab leh in 31-sano jirkaan uu ku guuleysto abaal-marintan saddex bilood oo xiriir ah, waxaana xiddigan reer Poland uu shabaqa soo taabtay todobo jeer lix kulan oo uu ka soo muuqday tartan rasmi ah bishii October.